Chii chinonzi ClamTK uye unofanira kuchiisa rinhi | Linux Addicts
Chii chinonzi ClamTK uye unofanira kuchiisa rinhi?
Diego ChiGerman Gonzalez | 04/05/2022 15:01 | Yakagadziridzwa ku 04/05/2022 15:02 | General, GNU/Linux, Zvirongwa, Linux software
ClamTK ndiyo graphical interface yekudzora yakavhurika sosi antivirus ClamAV
Izvo zvigadzirwa zvinopindura kune zvinodiwa here kana kuzvigadzira? Kunyangwe kubvumirana mukati menharaunda kuri kuti Linux haidi antivirus, mumwe munhu akaenda kune dambudziko rekuvagadzira. Muchokwadi, kune akati wandei mamwe maitiro ese emahara uye akavhurika sosi pamwe neanotengesa.
Muchikamu chino tichaona kuti chii chinonzi ClamTK, iyo graphical interface ye ClamAV, yakavhurika sosi antivirus mhinduro uye paunofanira kuiisa.
1 Isu tinoda antivirus paLinux?
1.1 Kushandiswa kwemitauro yakasiyana-siyana
1.2 Kushandiswa kwevatungamiri vezvinyorwa
1.3 asymptomatic mutakuri
1.4 Kwete kufambirana nemaupdates
1.5 Kushandisa Samba
1.6 Kuwedzera kuoma kwehurongwa
1.7 Tsanangudzo isina kunaka yemabasa neropafadzo
1.8 Kushaikwa kwekudzidziswa kwevatariri vehurongwa
2 Chii chinonzi ClamTk
3 ClamAV Features
Isu tinoda antivirus paLinux?
Kwenguva yakareba, vashandisi veLinux vakazvisimbisa isu kuti isu takanga tisina kodhi yakaipa. Zvisinei, mumakore achangopfuura Taifanira kunge takashandura pfungwa dzedu. Kurwiswa neLinux kwave kuwedzera kubvira 2016 uye inoda kusvika chikamu chimwe muzvitatu chemalware inotarisa iyi inoshanda sisitimu.
Pamwe, Uku kuwedzera kwekurwiswa imhaka yekuti masangano makuru akatendeukira kuLinux sesisitimu yakavimbika inokwanisa kuita mabasa akakosha kumaseva emakambani zvakanyanya uye nemutengo wakaderera. kupfuura vamwe vavo vepachokwadi. Nekudaro, yakave chinangwa chiri pamutemo chevanorwisa sezvo data ravanochengeta nemanetiweki avanotsigira zvakakosha zvikuru.
Kumwe kusasimba kunoshandiswa nevanorwisa ndeiyi:
Kushandiswa kwemitauro yakasiyana-siyana
Iko kushandiswa kwe-cross-platform application senge iyo yakarongwa muJava (iyo inomhanya pasi pemuchina chaiwo) ndiyo sosi yekupinda kune yakaipa software. EHE aya maapplication anoshanda ane data rakadzama, hazvina basa kuti uri kushandisa system ipi yekushandisa.
Kushandiswa kwevatungamiri vezvinyorwa
Linux ndiyo yakawanda inoshanda sisitimu mumaseva. Uye maseva mazhinji anoshandisa mamaneja emukati seDrupal uye WordPress. Maturusi aya anowanzo kuisirwa ane dhigirii repamusoro remvumo kusanganisira FTP kunyora kuwana. PKuti uwedzere mabasa, aya maneja emukati anowanzo shandisa yechitatu-bato ma-add-on ayo anowanzo kuve nemutengo wakakwira, ndosaka vanhu vazhinji vasingatarisire vanowanzo dhawunirodha kubva kune mamwe masosi. Uye, kunyangwe ivo vakatorwa kubva kunzvimbo dzepamutemo, zvikanganiso zvehurongwa izvo zvinokonzeresa kusagadzikana hazvigone kubviswa.
Hapana chinodzivirira komputa yeLinux kubva mukuparadzira malware kune masisitimu anotambura. Makomputa eLinux anogashira uye anotumira maemail ane zvakanamirwa zvinogona kutapukirwa.
Kwete kufambirana nemaupdates
Panyaya yemasevhisi akajairwa akadai seApache neFTP, kuchengetedza nguva nenguva kwakakosha sekufema kwezvipenyu.. Nguva dzose inogadziridza inoderedza njodzi, asi vanhu vazhinji vanowanzoona mabasa akakosha aya sekutambisa nguva uye vanofuratira zviziviso zvinovakumbira kuti vadaro. Dzimwe nguva imhaka yekuti zvigadziriso zvinokumanikidza kuti urege kushandisa zvirongwa zvisingachaenderane.
Samba isutu yezvirongwa zvinobvumira Windows neLinux kuti ibatanidzwe mune imwecheteyo network. Paunenge uchishandisa Samba, Linux migove inotaridzika uye zviite senge chero imwe Windows share. Kureva kuti Linux mvumo haichashandi. Windows kuchengetedza maturusi haana kugadzirira kuona malware kune mamwe mapuratifomu.
Kushandisa Windows maturusi kutarisa zviri mukati meLinux shares pamusoro petiweki kunomhanyisa njodzi yekusiya traffic pachena. Panyaya yemidziyo inoshandiswa mumabhizinesi, kumwe kurwiswa kunonyanya kukuvadza kwakaitwa nevashandi vaisagutsikana vachitsvaga kukuvadzwa kana kuwana mari.
Kuwedzera kuoma kwehurongwa
Nekushandisa tekinoroji yakadai semidziyo uye virtualization, zvinokwanisika kuve neakawanda mavhezheni eanoshanda system kana akawanda masisitimu anoshanda akaiswa panguva imwe chete. Ndosaka Kunze kwekunge uine otomatiki chishandiso chakaiswa kuti uzvigadzirise, zvigadziriso hazvigoneke kuteedzera. Saka, njodzi dzekuchengetedza dzinowedzera.
Sezvo makambani aivimba zvakanyanya neLinux kune yavo zvivakwa, vanorwisa vazviita chinangwa.
Tsanangudzo isina kunaka yemabasa neropafadzo
Linux ine hurongwa hwakajeka hwemabasa uye ropafadzo dzinofanirwa kunyatsoremekedzwa. Mudzi wekushandisa ndiye ane simba rekuwana chero kupi uye kuita chero shanduko mukati mehurongwa. Kune vamwe vashandisi avo, pasina kuve Root, vane ropafadzo dzakafanana.
Vashandisi vakajairwa vanonyimwa kuwana kune dzimwe nzvimbo dzakaoma dzehurongwa, asi neruremekedzo kune zvikamu zvavanogona kuwana, kune zvakare akasiyana zvirambidzo pane zvavanogona kuita.
Mutemo ndewekupa mushandisi wega wega kodzero dzavanoda, asi nekuti zvinotora nguva, zvakaoma, kana kushaya ruzivo, iyo mitemo haiwanzo kuteverwa.
Kushaikwa kwekudzidziswa kwevatariri vehurongwa
Masysadmins akadzidziswa haawanzo uye anodhura. Nguva zhinji vanhu vanopihwa basa vasina ruzivo rwakakwana uye vakaremerwa nebasa. Kunyangwe mumamiriro ehunyanzvi, vanowanzo sungirirwa kune mamwe matekinoroji pasina kuratidza kuti iwo ndiwo chaiwo mune yega yega.
Chii chinonzi ClamTk
ClamTK inogona kuiswa kubva kuSoftware Center yekugovera kukuru kweLinux
Ichokwadi kuti zvinenge zvese zvandinotaura pamusoro apa zvinoreva maseva uye makuru emakambani network. Zvakare izvozvo Ruzhinji rweruzivo nezve kudiwa kwekuisa antivirus paLinux inouya chaizvo kubva kuLinux antivirus vanogadzira. Rega nditaure ndima kubva pawebhusaiti ine zita ratinodzivisa.
Haasi ese antivirus mhinduro dzakafanana. Sezvambotaurwa pamusoro apa, ekuzvarwa Linux antiviruses akakwirira kune Windows-based solution. Asi pane misiyano mikuru pakati pezvishandiso zveantivirus zvemuno zvaunofanirwa kutora nguva yekutsvaga kuti uite sarudzo yakanaka yesangano rako. Semuenzaniso, yakavhurika sosi mhinduro inogona kukwezva vashandisi pekutanga kuona nekuti ivo vanoshambadzirwa semahara. Nekudaro, izvo zvekuchengetedza nekugadzirisa zvinodiwa zvakanyanya kuomarara uye zvinodhura zvikwata zvekuchengetedza nguva yakawanda uye kushanda nesimba. Zvimwe zvinhu zvakakosha zvakaita sekureruka kwekushandisa, kuita, kutariswa mitengo, rutsigiro, scalability, uye centralized manejimendi inofanirawo kunyatsotariswa usati waita sarudzo.
Ndinodzokera kumubvunzo uri kwekutanga kwechinyorwa.Zvigadzirwa zvinopindura pane zvinodiwa here kana kuti vanozvigadzira? Kuwedzera kwehutera ichokwadi. Ndizvo zvakare pamakomputa emushandisi mumwe chete uko kuiswa kunoshandiswa kazhinji uye zvirongwa zvinoiswa kubva kune zviri pamutemo repositori, hapafanirwe kuve nedambudziko.. Zvakawanda kana ukasavhura zvakanamirwa.
Chero zvazvingava, zvakakodzera kutora matanho ekuzvidzivirira uye ClamTK inouya muno
ClamTK ndiyo graphical interface yeyakavhurika sosi antivirus ClamAV. Iyi ndiyo yakavhurika sosi tekinoroji yekuona yeTrojans, mavhairasi, malware, uye kumwe kutyisidzira kwakashata.
Kutarisa uchishandisa mutsara wekuraira kana ne graphical interface (Kuisa ClamTK)
Kutyisidzira Database Updater uye masiginecha edhijitari aine mukana wekuzviita kuburikidza nezvinyorwa.
Gadziridza kanoverengeka pazuva pazuva rekutyisidzira dhatabhesi.
Tsigiro kune ese mafomati ye email.
Yakavakirwa-mukati tsigiro yeakasiyana mafomati ekuchengetedza, anosanganisira ZIP, RAR, Dmg, Tar, GZIP, BZIP2, OLE2, Cabinet, CHM, BinHex, SIS, nevamwe.
Yakabatanidzwa rutsigiro rweELF executables uye anotakurika mafaera anotakurika akazara neUPX, FSG, Petite, NsPack, wwpack32, MEW, Upack uye yakafukidzwa neSUE, Y0da Cryptor nevamwe.
Yakavakirwa-mukati tsigiro yeanozivikanwa magwaro mafomati, anosanganisira MS Hofisi uye MacOffice mafaera, HTML, Flash, RTF, uye PDF.
Kana paine chingataurwa nezve ClamTK ndizvozvo chimiro chayo chinoshanda pane kunaka. Chete mabasa akarairwa nechikamu uye anomiririrwa neiyo icon. Patinoisa chinongedzo pane yega yega icon, inotiratidza tsananguro pfupi yehunhu hwese basa. Nekudaro, haina intuitive uye inoda tsvakiridzo kana kujairana nekushandisa antivirus.
ClamTK inotibvumira kuongorora mafaera nemaforodha, zvese nemaoko uye otomatiki.
Iwo akasiyana ClamTK sarudzo ndeaya:
Kuisa: Sarudza kuti chii uye sei chinoongororwa.
White list: Anoona kuti haaonekwi sengozi.
Network: Inopa ClamAV rombo rekuwana iyo Internet.
Kuongorora: Inosarudza nguva iyo kuongororwa kunoitwa kana dhatabhesi yakagadziridzwa.
Nhoroondo: Inoratidza ma scan ekare.
Kuiswa kunzvimbo yausingasangani nevamwe: Inokutendera kuti udzorere kana kudzima mafaira ari ega.
Zveshuwa: Inokutendera kuti uongorore zvakaiswa zvigadziriso uye yekuvandudza modhi.
Update Wizard: Inokutendera kuti uone kuti zvigadziriso zvinogamuchirwa sei.
Natsa faira: Ndinofanira kunyatsoitsanangura here? Faera rinosarudzwa mukati memuongorori uye OK inodzvanywa.
Skena folda: Zvimwe chete, asi nemafolda.
Kuongorora: Inoratidza mhedzisiro yekuongororwa kwefaira.
Sekuona kwangu, ClamTK (inowanikwa mumatura ezvese kugoverwa kweLinux) haitore mukana wezvese kugona kweClamAV, asi, nekuda. kushandiswa kwayo mumidziyo yemumba inochinjika zvakakwana. Rangarira kuti chero mumwe wedu anodyidzana nemultimedia zvemukati uye akavhura zvakanamirwa izvo zvatinogamuchira mumaemail kana mameseji masevhisi. Kunyange vakasatapurira komputa yedu, tinogona kugara tichivamisa kutapurira emumwe munhu.
Ndinogara ndichiita kuenzanisa nenyaya yenguruve duku dze3. Mhumhi yakakwanisa kupinda mudzimba mbiri dzekutanga. Uye, dai akatora nguva yake, angadai akabudirira nechitatu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Chii chinonzi ClamTK uye unofanira kuchiisa rinhi?
Ndinoda chinyorwa chine dzimwe nzira dzeClamAV mulinux, handizive kana imhaka yekushandiswa kweClamTk asi, zvirinani pamushini wangu (uyo wakare uye une mwero muzviwanikwa), unoshandisa gross mari ese ari maviri. mukuuraya (processor) uye mundangariro (gondohwe) paunenge uchiita scan.
elementaryOS 7.0 inotanga budiriro, ikozvino Ubuntu 22.04 yakaburitswa uye nyaya dzemukati dzagadziriswa.
Tor 0.4.7.7 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo